चण्डि ढकाल लडाकु गुरिल्ला हो, उसलाई रोक्न त्यति सजिलो छ ?
Saturday, July 11, 2020 |शनिवार, असार २७, २०७७
अर्थ - बाणिज्य , अन्तर्वार्ता
चण्डि ढकाल लडाकु गुरिल्ला हो, उसलाई रोक्न त्यति सजिलो छ ? चण्डीराज ढकाल, पूर्व अध्यक्ष- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जनतापाटी शुक्रवार, असार १२, २०७७, १०:२१:०० मा प्रकाशित
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन हुने नै भयो, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
विधानअनुसार चैत्र २९ मा हुनु पर्ने थियो । परिस्थिति पनि त्यति अनुकूल भएन । त्यसमाथि कुर्सी छोड्न जसलाई पनि महाभारत नै हुंदो रहेछ । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई मात्र होइन, संघ संस्थाका नेताहरुलाई पनि कुर्सी छोड्न गाह्रै हुन्छ । महासंघका अहिलेका पदाधिकारीलाई पनि बेला यही हो, केही दिन लम्बाउन सकिन्छ, अलिदिन कुर्सीमा वस्न पाइन्छ कि भन्ने लोभ लाग्यो होला, अनि उनीहरुले विधानलाई लत्याउन खोजे । साधारण सभा सार्नको लागि अनेक प्रयास गरे । जे भए पनि साउनको २७, २८मा साधारण सभाको मिति घोषणा गरिएको छ । त्यो मितिमा हुन्छ ।
अहिलेको सिंगो साधारण सभा नै चण्डी भर्सेस वर्तमान तथा अन्य पूर्व अध्यक्षहरु भन्ने देखिएको छ, अरु कुनै पनि पूर्व अध्यक्षसंग तपाईको कुरा नमिल्नु पर्ने कारण के हो ?
सबै पूर्व अध्यक्ष होइन, केही पूर्व अध्यक्षहरु निर्वाचनको बेला चण्डीलाई रोक्नको लागि गोलवन्द हुन्छन् । हरेक पटकको निर्वाचनमा त्यो हुने गरेको छ, अहिले पनि त्यही भएको हो । म महासंघ भनेको देशभरिका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो, त्यसैले देशका हरेक उद्योगि व्यवसायीको संरक्षण महासंघले गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुं । महासंघको कोठामा फोटो झुण्डाउनको लागि पदाधिकारी हुने होइन, काम गरेर हरेक व्यवसायिको मन जित्ने पदाधिकारी बन्नु पर्छ भन्ने विश्वास गर्ने मान्छे हुं । तर महासंघमा कुनै प्रभावकारी काम नगरेरका धेरै पूर्व अध्यक्षहरुले काम गर्नेहरुलाई हतोत्साहित र काम नगर्नेहरुलाई काखी च्याप्ने गरेकोले मेरो कुरा नमिलेको हो ।
महासंघको विधान अनुसार प्रभावकारीरुपमा काम गरौं भन्दा उनीहरुलाई आपत्ति भएको हो । मैले महासंघलाई काठमाण्डौमा मात्र होइन, देशभरि जहां व्यवसायी छन्, त्यहां पुर्याउनु पर्छ भन्दा उनीहरुलाई आपत्ती भएको हो । मैले हिजो विधान संशोधन गरेर प्रभावकारी रुपमा काम गरौं भन्दा उनीहरुले आपत्ति जनाए । अनि मैले ल ठिकै छ, तिमीहरुले भने अनुसार नै गरौं न त भन्दा पनि उनीहरुलाई नै आपत्ति । ल भन्नुस त मैले के गर्ने ? मेरो सरोकार कामसंग हो । विधानलाई टेकेर अधिकतमरुपमा उद्योगि व्यवसायीको हित हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । मलाई कामसंग अरु कुनै कुरासंग मतलव छैन ।
तर, महासंघको अहिलेको नेतृत्वले त तपाईलाई साधारण सभामा प्रवेश गर्न समेत नदिने प्रयास गरिरहेको कुरा सुनिदैंछ । त्यस्तो भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
कसैले कसैलाई अवैध भन्दैमा हुन्छ ? कुरो त्यति सजिलै हुन्छ ? विधान, पद्धती हुंदैन ? केही पूर्व अध्यक्षहरुले अहिले चण्डिलाई पाखा लगाउन सकिन्छ कि भनेर गलत प्रवृत्तिलाई बोकिरहेका छन् । अहिले चण्डिलाई फ्यांकेको पासोमा कुनै दिन आफै पर्छु भन्ने कुरा तिनीहरुले हेक्का राखेका छैनन् । स्वंय भवानीलाई पनि त्यसको हेक्का छैन । पछि थाहा पाउने दिन आउंछ, अनि ए भन्दै पछुताउछन् ।
अहिले नै सबै कुरा नभनौं । यति मात्रै भनौं कथा पढ्न शुरु नगर्दासम्म हो, त्यसको कुरा थाहा नहुने । कथा पढ्न थालेपछि पात्रहरुको नाम र प्रवृत्ति आफै आउंछ भन्ने कुरा बुझेकै राम्रो हुन्छ ।
स्पष्ट भनिदिनुस् न साधारण सभामा तपाईलाई रोक्ने प्रयास भयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ?
व्यक्तिले रोकेर कोही रोकिन्छ ? विधानले रोक्नु पर्दैन ? मैले महासंघको विधानलाई लत्याएर कहिल्यै कुनै काम गरेको छैन भने कस्ले कसरी रोक्न सक्छ ? चण्डि ढकाल भनेको लडाकु हो । महासंघको हितको लागि, देशभरका व्यवसायीको हितको लागि जस्तोसुकै लडाई लड्न पनि तयार भएको, लड्दै आएको लडाकु गुरिल्ला हो । हिजो द्धन्दको समयमा वम, गोला र बारुदसंग छलिंदै रात दिन नभनी देशको कुना कुनाका व्यवसायीको समस्या समाधानको लागि दौडिने मान्छे हो चण्डि ढकाल । त्यो कुरा देशभरिका उद्योगि व्यवसायीलाई थाहा छ । त्यसैले चण्डिलाई रोक्न त्यति सजिलो छ ? सांच्चै नै मानमर्दनमै उत्रिनुपर्यो भने को कति पानीमा छ भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा हुन्छ ।
महासंघका केही व्यक्तिहरुले निरन्तर पेलिरंहदा सहन नसकेर विनोद चौधरीले सिएनआई खोले, अहिले चण्डिको नियती पनि त्यस्तै देखिदैंछ । त्यसैले अबको केही समयमा नयां संगठन खुल्छ भन्ने अडकल बाजी पनि चलिरहेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
महासंघमा धेरै ठूलो पसिना वगाएको व्यक्ति हुं म । महासंघलाई टुक्राएर अर्काे संस्था खोल्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिन । जे हुन्छ, यंही भित्र हुन्छ । चुनावमा हारजित सामान्य कुरा हो । नेताहरुले चुनाव हार्ना साथ, आफू पछाडि पर्ना साथ नयां पार्टी त बनाउंदैनन् नी । त्यही भित्र लड्छन्, अर्काे चुनावको तयारी गर्छन । त्यस्तै म पनि जे गर्छु, यही भित्र लड्छु ।
तपाई अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, त्यहांभन्दा माथि अर्काे पद छैन । महासंघ भित्रको राजनीतिमा तपाईको स्वार्थ वा महत्वाकांक्षा के हो ?
मेरो स्वार्थ, महत्वकांक्षा केही छैन । महासंघले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नु पर्यो । देशभरिका उद्योगि व्यवसायीको हित रक्षाको लागि पहल गर्नु पर्यो भन्दा मैले के विगारें ? देशको जुनसुकै कुनाका भए पनि उद्योगि व्यवसायीले सहयोग मागे भने म हरहालतमा सकेको सहयोग गर्छु । त्यो मेरो दायित्व नै हो । त्यसवाहेक मेरो अरु कुनै महत्वाकांक्षा छैन ।
केही महिना अगाडिसम्म हालकी अध्यक्ष भवानी राणा र तपाईको घांटी जोडिएको थियो । भवानीको मुखबाट निस्किएको कुरा चण्डिले बोलेको हो, चण्डिको ईशारा नपाई भवानीले केही गर्दिनन् भन्नेसम्मको कुरा सुनिन्थ्यो । नघुमाईकन ठाडै भनिदिनुस त के कुराले तपाईहरुको लडाई शुरु भयो ?
यो प्रश्न भवानीलाई सोध्नु पर्छ । हिजो उनी कुन परिस्थितिमा थिइन, को कस्ले उनलाई कस्तो व्यवहार गरेको थियो र चण्डिले महासंघमा स्थापित गराउन के के गर्यो ? र अहिले को कस्को वहकाउमा लागेर चण्डिलाई सिध्याउने अभियानमा लागेकी छन् भन्ने कुरा उनलै जान्ने कुरा हो ।
हिजो गलत मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएछु भनेर पछुतो मानिरहनु भएको छ ?
पछुतो मानेर के गर्नु ? म मान्छे नै लडाकु हुं, लड्नु पर्छ भन्ने लागिरहेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाललाई जिताउनको लागि लागिरहनु भएको छ, सक्नुहोला ?
हो, म चन्द्रजीको टिमलाई जिताउन लागिरहेको छु । के हुन्छ, त्यो त साधारसभाबाट थाहा भैहाल्छ ।
अधिकारीको सुकर्मको सम्झना नेपाली जनताले सधैंभरि गरिरहने : भट्टराई आइतवार, फाल्गुन १९, २०७५, १०:३०:००
कांग्रेस नेता ताम्राकारको निधन मंगलवार, बैशाख १०, २०७६, १८:४३:००
उद्योगमा डेढ अरब बराबरको लगानी प्रस्ताव मंगलवार, भदौ १२, २०७५, ०९:०३:००
फेरी बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य
बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रमका लागि तीन अर्बको सहयोग
धितोपत्र बजारसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित
पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई तीन लाख सहयोग